About Us - Jiangsu KingRay darka Waxyaabaha Co., Ltd
Jiangsu KingRay darka Waxyaabaha Co., Ltd. waa soo saaraha ah xirfadeed ee PTFE suumanka fusing / dhimatay aan xuduud lahayn, dhar dhimatay Laminator Release Fabric / dhimatay Maro adag, Maro adag dhimatay dhar koolo, Maro adag dhimatay mesh suunka, dhimatay linner foornada, dhimatay microwave suunka qalajiyaha, dhimatay kulaylka suunka quwad, dhimatay Separater Release Belt, dhar caag silicone. Iyada oo qalab horumarsan iyo teknoolajiyada.
Waxaan soo maray sugida ISO9001 iyo Germany DQS ganacsiga qoyska isku mid ah. Tan iyo markii ay aasaaska, waxaannu nahay dad u hoggaansanaayeen jinni oo ganacsi oo ka mid ah "takhasus, Technicalization, Miisaanka, Dadka First, iyo Innovation."
Waxaan ku adkeeyey xiriirka mudada dheer qaar ka mid ah soo saarayaasha caanka farsamo labada gudaha iyo dibaddaba, sida Veit GmbH, Hashima, Oshima, Summit, iyo shirkadaha KDK. waxyaabaha lagu ballaaran dhoofiyay in ka badan 20 dal iyo gobollada, waxaana ay badiyeen trust iyo ammaan macaamiisha.
Waxaan hubnaa in waxyaabaha our tayo sare leh iyo adeegyo aad u fiican soo jiidan doonaa mahadnaq iyo aad u badan macaamiisha. Sida naloola soo xidhiidho waa talaabada ugu horeysa si ay u dhisaan ilaa xiriir guul ganacsiga nala. Haddii aad xiisaynayso in mid ka mid ah waxyaabaha our, fadlan si xor ah u booqataa bartayada internetka amase nala soo xiriir si toos ah wixii macluumaad dheeraad ah. Waxaan rajeyneynaa in iskaashi kula mustaqbalka dhow.